हाम्रा सामुदायिक विद्यालमा ज्ञान सर जस्तै शिक्षक भइदिए शिक्षाको स्तर कहाँ पुग्थ्यो होला ? - Arthik Sandesh हाम्रा सामुदायिक विद्यालमा ज्ञान सर जस्तै शिक्षक भइदिए शिक्षाको स्तर कहाँ पुग्थ्यो होला ? - Arthik Sandesh
हाम्रा सामुदायिक विद्यालमा ज्ञान सर जस्तै शिक्षक भइदिए शिक्षाको स्तर कहाँ पुग्थ्यो होला ?
काठमाण्डौ । हेर्ने कथा टिमले भर्खर सार्वजनिक गरेको नयाँ कथा ज्ञान सरको कथालाई धेरैले उत्कृष्ट कथाको रुपमा लिएका छन । एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई आमुल परिर्वतन गरि उच्च गुणस्तरको शिक्षा दिनमा समाज र ज्ञान सरले गरेको योगदानलाई कथामा उठाइएको छ ।
स्याङजा मिर्मि सामुदायिक स्कुलको कथा हो यो । कथामा एक ब्यक्तिको सक्रियताले कसरी शिक्षामा आमुल परिर्वतन ल्याउन सकिन्छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ । तीन दशक लामो समय विना स्वार्थ शिक्षण पेसामा लागेका ज्ञान सरको कथाले धेरैलाई प्रेणा मिलेको प्रतिक्रिया आएका छन ।
आउनुहोस सो कार्यक्रमको पूर्ण भाग हेर्नुहोस
प्राइम लाइफ इन्स्यारेन्सले बोनस शेयर दिने
काठमाडौं–प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले शेयरधीलाई बोनस शेयर दिने भएको छ । प्राइमले १५ प्रतिशत बोनस शेयर दिने भएको छ । इन्स्यारेन्सले १५.८७ प्रतिशत लाभांश दिने...